Wasiirka Amniga Soomaaliya oo ku goodiyay in Dad badan xilkooda waayi doonaan oo uu isagu ku jiro – Balcad.com Teyteyleey
Wasiirka Amniga Soomaaliya oo ku goodiyay in Dad badan xilkooda waayi doonaan oo uu isagu ku jiro
Maxamed Abuukar Isloow Wasiirka amniga Soomaaliya ayaa maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho wuxuuna sheegay inay amaan darada Gobalka Banaadir ay korortay maalmihii la soo dhaafay arintaasina ay tahay wax aan loo dulqaadan karin.
“Waxaan ciriiri gelinay shacabka, waxaana la xiray inta badan wadooyinka Muqdisho walina waxaa socda dilal, qaraxyo iyo weeraro ka dhacaya Xaafadaha Magaalada Muqdisho taasina waxay soo de dejinaysaa in saraakiil ciidan ku waayaan xialalkooda” ayuu yiri Wasiirka amniga Soomaaliya.
Wasiirka amniga Soomaaliya ayaa sheegay in Shacabka la geliyay Ciriiri wadooyinka la xirnay jid cadayaasha sidoo kale la xiray, welina wuxuu sheegay in dilalkii weli socdaan, “Suurta gal ma ahan in shalay bartamaha Xamar weyne lagu dilo shaqaale Dowladeed dadkii dilayna aan qaban weyno waa in aan ogaana halka uu qaladka ka jiro” ayuu yiri wasiirka.
Dhanka kale wasiirka ayaa sheegay inay amni darada Muqdisho ay keeni donto Ciqaab ku dhacda Saraakiisha amniga hadii aysan cadeynin ilaa Axada dadka ka danbeeyay weerarada Muqdisho, wuxuuna wasiirka ku goodiyay in Dad badan xilkooda waayi doonaan oo uu isagu ku jiro, hadii aan 3 maalmood lagu cadeynin dadkii ka danbeeyay dhacdooyinkii magaalada muqdisho Bilooyinkii la soo dhaafay ka dhacaayay.
The post Wasiirka Amniga Soomaaliya oo ku goodiyay in Dad badan xilkooda waayi doonaan oo uu isagu ku jiro appeared first on Ilwareed Online.
Khasaaraha ka dhashay qarax gaari oo ka dhacay D/Xamarweyne